Meydka Ganacsade Soomaaliyeed Oo Laga Helay Koonfur Afrika
Sunday June 30, 2019 - 14:56:11 in Wararka by
Meyd la rumeysan yihiin inuu ahaa Ganacsade Soomaaliyeed oo la oran jirey Maxamed C/llaahi Xasan ayaa waxaa laga soo saaray dhul-kaymeed u dhow degaanka Bakenberg oo u dhow Degmadda Mahwelereng ee Gobalka Limpopo ee dalkaasi.
Marxuumka oo 26-jir ahaa waxaa la sheegay in la dilay, lana dhacay bishii June 24-dii ee sannadkii hore, iyadoo ay Dembi-baarayaasha dalkaasi ku guuleysteen inay gacanta ku soo dhigeen Gacan-ku-dhiiglihii iyo Gaarigii Marxuumka lahaa ee lagu dhex dilay.
Afhayeenka Boliska Gobalka Limpopo, Kolonel Moatshe Ngoepe ayaa sheegay inay Baarayaasha ku takhasusay baaritaanka dadka la dilo ay weli ku guda jiraan si ay u xaqiijiyaan inuu maydkaasi yahay Ganacsadaha Soomaalida ee la oran jirey Maxamed C/llaahi Xasan.
Dhinaca kale, Boliska dalkaasi waxay bishii la soo dhaafay ee May 2-dii gacanta ku dhigeen Gacan-ku-dhiiglaha oo 26-jir ah, kaasi oo qirtay inuu dilay Marxuumka.
Wararkii ugu dambeeyay Qaraxii ka dhacay Magaalada Muqdisho + Sawirro
Dhageyso:- Warka Duhur Ee Radio Dalsan 30-06-2019
Eedeysanaha oo horey shaqaale u ahaa Marxuumka waxa uu tilmaamay inuu ka codsaday inuu ka codsaday inuu horey u sii qaado, kadibnah markii uu gaariga la soo raacay uu Toorey la dhacay ilaa uu ka geeriyooday Marxuumka.
Eedeysanaha waxa uu Marxuumka ka dhacay Lacagtii, kadibna waxa uu kaxeeyey gaariga, isagoO Marxuumka ku aaday dhulka hawdka leh ee ay Boliska ka soo heleen maydkiisa.
Sidoo kale, Boliska waxay Gaariga Marxuumka ka soo heleen duleedka Deegaanka Polokwane bishii April 24-dii ee sannadkan, kadib, markii loo soo far muuqay Gacan-ku-dhiiglihii iyo gaariga Marxuumka.
Eedeysanaha oo bishan 25-dii ka soo hor muuqday Maxkamadda magaalladda Seshego, waxaa dhegeysiga dacwadiisa dib loo dhigay ilaa bisha soo socota ee Augsut 5-da, si loogu oggolaado Boliska inay sameeyaan Baaritaano kale oo dheeraad ah.